gPodder: Nchịkọta mgbasa ozi dị mfe na onye ahịa Podcast maka Linux | Site na Linux
Ebe ọ bụ na, ụbọchị ndị a ọ bụ ezigbo ejiji iji Podcasts, ọ bụghị naanị maka ubi nke mgbasa, mmuta na nkuzi site na ubi nke Free Software, Mepee Isi mmalite na GNU / Linux, ma maka ụdị niile, ọdịnaya na nzube, taa anyị ga-ekwu maka ya «gpodder ».
«gpodder » bụ obere, ma dị nnọọ uru software ngwá ọrụ mepụtara na Python na GTK +, nke na-arụ ọrụ dị ka ihe dị mfe onye nchikota ndi oru nta akuko na onye ahia ya maka Linux, ya bụ, ọ na-enye anyị ohere budata ma gee otutu channelụ pọdkastị n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa.
Tupu m amalite ịkọwa «gpodder »Dị ka ọ dị na mbụ, anyị na-akwado na mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a, gaa na mbipụta anyị gara aga metụtara isiokwu nke ngwa bara uru iji gee Podcast na Linux, nke gbasara Ezigbo», nke anyị na-akọwa na oge ruru dị ka ndị a:
Agbanyeghị, n'agbanyeghị ịbụ ngwa iji gee ntị Igwe redio n’Intanet, na a obere aghụghọ kọwara na kwuru post, anyị nwere ike ige ntị n'ịntanetị na ụfọdụ ọwa nke Podcast.
1 gPodder: aggregator Media na Podcast client
1.1 Ozi bara uru banyere gPodder
1.2 Gịnị bụ ihe ọhụrụ na mbipute 3.10.17
1.3 Ntinye na Nseta ihuenyo
gPodder: aggregator Media na Podcast client
Ozi bara uru banyere gPodder
Dị ka gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentịugbu a «gpodder » na-aga maka nke ya mbipute 3.10.17. Enwere ike nyochaa nke a na ụdị ya gara aga site na ịpị ndị na-esonụ njikọ. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụ Onye Ọrụ Linux Omenala Linux nke na-enye anyị ohere ijikwa (budata ma gee ntị) ọkacha mmasị anyị pọdkastị ọwa site na interface dị mfe, mana juputara na njirimara, dị ka ịgbakwunye / edezi / ihichapụ / nyocha na / ma ọ bụ mbubata / mbupụ pọdkastị. O nwekwara njikọ dị omimi na weebụsaịtị «Soundcloud (soundcloud.com)» y «GPodder (gpodder.net)».
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na mbipute 3.10.17
N'etiti ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ (nrụzi na ndozi) gụnyere na nsụgharị ọhụụ ọhụrụ a, gụnye ihe ndị a:
Ntinye ọrụ YouTube-DL.
Ndozi na njehie melite nke ndị na - akpata ihe nchịkọta (faili ntanetịime), nke na - eme naanị otu ọkwa. Kedu nke a ga-ahụ site na akara ngosi ịdọ aka na ntị n'akụkụ aha ha.
Imelite nkwado asụsụ dị iche iche maka Chinese, Russian, Portuguese Portuguese, German, na ndị ọzọ. A sụgharịghị interface ya n'ụzọ zuru ezu maka asụsụ Spanish, mana n'ọtụtụ dị ukwuu.
Maka Linux, MacOS na Windows.
Ntinye na Nseta ihuenyo
N'okwu nke aka m, etinyewo m gPodder n'iji ya Ugbor, gbasara m MX Linux Personal Respin (MilagrOS), nke ị ga-achọ ime iwu a:
Iji na-agba ọsọ na-eji ya site na Ngwa NchNhr. Ọ dị ka egosiri na onyonyo dị n'okpuru:
Cheta na: Onwe, si «gpodder » Enwere m mmasị na ike tinye URL nke Channel YouTube na inwe ike ibudata ha na-enweghị nsogbu ọ bụla. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere ịnweta URL nke faili ntanetịime ha n'ụzọ dị mfe, iji tinye ha na, dịka ọmụmaatụ, ndepụta nke weebụsaịtị. Enweghị m mmasị na ya, nke na-adịghị eweta faịlụ nhazi «.deb, .rpm o .AppImage», ọ bụ ezie na ọ dịtụ mgbakwunye na nnweta nke LaunchPad. Morezọ ọzọ dị elu karị nwere ike ịbụ Podgrab.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «gPodder», nke bụ obere, ma bara ezigbo uru ngwanrọ ngwanrọ mepụtara na Python na GTK +, nke na-arụ ọrụ dị ka ihe dị mfe onye nchikota ndi oru nta akuko na onye ahia ya maka Linux; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » gPodder: Nchịkọta mgbasa ozi dị mfe na onye ahịa Podcast maka Linux